Maxkamada Malmö oo ka hiilisay Muslimiinta | Somaliska
Maxkamada Malmö oo ka hiilisay Muslimiinta
Maxkamad ku taala magaalada Malmö ayaa xukun qafiif ah ku riday nin Swedish ah oo horay u garaacay hooyo iyo gabadheed Muslim ah. Maxkamada ayaa ku xukuntay ninka in uu sameeyo 75 saacadood oo hawlaha bulshada ah isla markaana uu bixiyo 17,000kr oo magdhow ah.
Go’aanka maxkamada ayaa noqday mid lala yaabay maadaama dambiga uu galay ninkaan uu yahay mid weyn oo ku dhisnaa naceyb diimeed (hatbrott). Ninkaan ayaa hooyada Muslimada ah iyo gabadheeda si xun u garaacay iyaga oo ka soo baxay hospital ku yaalada Malmö. Ninkaan ayaa ujeedada uu u weeraray dumarka Muslimiinta ahayd naceyb uu u qabo Muslimiinta iyo Islaamka, isagoo markii uu garaacayay gabdhaha ku qaylinayay erayo ay ka midyihiin “wadankeena ayaad burburinaysaan” iyo erayo kale oo lidi ku ah soo galootiga.
Si kastaba ha ahaatee, qareenka Maxkamada Malmö ayaa ku dooday in ay adagtahay in la cadeeyo in ninkaan uu galay dambi ku dhisan naceyb. Arintaas ayaa la yaab ku noqotay dadka oo dhan, iyadoo ay iska cadahay in ninkaan uu gabdhaha u weeraray diintooda, isagoo xitaa uu marqaati ku furay askari boolis ah oo goobta yimid. Ninkaan ayaa xitaa diiday in uu la hadlo askariga maadaama uu ahaa nin soo galooti ah. Sidoo kale ninkaan ayaa ah xubin ka mid ah urur lagu magacaabo Tryckfrihetssällskapet oo ah mid lidi ku ah Muslimiinta iyo Islaamka.
Go’aanka maxkamada ayaa ah mid lagu qoslo oo ay iska cadahay in qareenka maxkamada uusan daacad ka ahayn kiiskaan.
Cudurka E. coli oo Sweden soo gaaray
Löfven oo doonaya in dhalinyarada la siiyo deyn si ay laysanka u qaataan
Waa caadadooda gaaloo dhan in ay Islaamka neceb yihiin caradiina ku dhinta dheh.
aniga waxaan u arkaa wax is ka caadi ah galada waa isku hii liyaan marka wmelkasto ana kaa is dhignay
April 2, 2014 at 21:47
Malmö+oll Skåne waxaas waaka caadi anaga wan laqabsanay
Maama Caasha says:
April 3, 2014 at 02:19
Kan la baxay Daade, hadeey caadi ku tahay gadho muslimiin la garaacay hadana qaadigi ka hiiliyay ku quman ma tihid.
Balsi waxaa ka muuqata kuwi Somalia dadka si xuun u gali jiray in aad tahay, allah ku soo hanuuniye, naxariisna kuugu beero.
Tingsrätt hadey cadaalad daro muujisay macnaheedu maha sheekada ineey dhamaatay. Wa in appeal laga qaataa ilaa hovrätt- högsta domstolen.
Waar jaahiliin ayaad tihiin fadhi ku dirira. wixii aad wadankiinii kusoo baabiiseen ayaad xagan la imaneysaan. ” maxkamadu dhinac bey u eexatey iyo Muslimiintaa laga hiiliyey” waxaa waxba kama jiraan. Mana aaminsani Sverige iney diinta Islam-ka kasoo horjeedo, magaalo walba masaajido ayaa ka furan…
diintiina haka tagina asturkiina haka tagina kitaabkiina hadhigina xijaabkiina qaata hadi sheeydaanka iyo gaalada idinneceb yihiin waxaa idinjecel allaah iyo rasuulka iyo malaa ikta alle maxkamada malmo iyo maxkamada allaah yaaween ? gaalka xadgudubka sameeyay iyo qaadiga cawaanka ahba xaga alle danbiileyaal ayeeyka yihiin allaah waa uu sheegay weeyku waaridoonaan abit jahanaba gaalada ayakaadulman aaqiro iyo aduunba kaliyah anaka wadada noofuran waa iimankeena inaa kordhino quluubteenana inaan xaga alle aadino